Weerar Gaari Dagaal Looga Gubay Ciidamada Mareykanka. – Bogga Calamada.com
Weerar Gaari Dagaal Looga Gubay Ciidamada Mareykanka.
Weerar culus oo khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed lagu gaarsiiyay askarta Saliibiyiinta Mareykanka ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah Bariga dalka Afghanistan.
Ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa weerar culus oo qarax ah la beegsaday kolanyo ka tirsan ciidamada Saliibiyiinta Mareykanka oo ku socdaalayay qeybo qeybo ka mid ah gobalka Luqman ee Bariga Afghanistan.
Qaraxa ayaa haleelay gaari nooca gaashaaman ah oo ay wateen askarta American-ka waxeyna gabi ahaan miinada burburisay gaariga ay haleeshay,sidoo kale qaraxa waxaa baqti iyo dhaawac ku noqday askartii American-ka ee la socotay gaariga gaashaaman ee miinada ay burburisay.
Qaraxan ayaa kusoo aadaya xilli bishii lasoo dhaafay weeraro ciidamada Mujaahidiinta Dhaalibaan ay ka fuliyeen gudaha dalka Afghanistan ayaa lagu dilay inka badan Soddon Iyo Todobo askari American ah.